Vaindohan-draharaha ny fandriampahalemana | NewsMada
Vaindohan-draharaha ny fandriampahalemana
Milamina tsy milamina! Voatendry ny praiminisitra vaovao ary vita omaly ny fifamindram-pahefana teo amin’ny vaovao sy ny teo aloha. Nambaran’ny Praiminisitra Ntsay Christian fa vaindohan-draharaha ny fifidianana eken’ny rehetra amin’ity. Natsidiny kosa fa hojerena ny resaka tsy fandriampahalemana. Vaindohan-draharaha mihitsy anefa raha ny tokony ho izy fa tsy hojerena fotsiny ny resaka fandriampahalemana. Tsy misy fifidianana handeha amin’izay laoniny eto raha tsy milamina ny tany.
Iza ny tsy mikaikaika amin’ny firongatry ny tsy fandriampahalemana? Ny jiolahy an-drenivohitra manao ny ataony, manafika mirongo basy. Ny any Toamasina aza, inefatra isanandro ny fanafihana ary miparitaka izaitsizy ny basy. Avy aiza ihany ireo basy ampiasain’ny jiolahy ireo? Avy amin’ny mpitandro filaminana ihany.
Mandravarava tanàna ny dahalo, ary tato ho ato izay, maromaro ny zandary matin’izy ireo. Maty voatifitra avokoa ireo fa tsy maty voakapan’ny famaky na voan’ny lefona akory. Basy avy aiza ihany koa ireo?
Manampy trotraka izany ny fitsaram-bahoaka efa manerana mihitsy ny faritra. Leo ny olona ka mamono, sady endriky ny tsy fahatokisan’ny vahoaka ny mpitandro filaminana sy ny fitsarana ihany koa izany. Tsy lazaina intsony ny ray aman-dreny mamono mahafaty ny zanany, vokatry ny krizy daholo izany.
Eo ihany koa ny resaka kidnapping izay mampikaikaika ireo Karana eto amintsika. Anisan’ny fitondrana be kidnapping indrindra ny tamin’ity fitondrana ity. Mampitsoaka mpampiasa vola mihitsy, raha ny fitarainan’ireo mpikambana ao amin’ny Karana mizaka zom-pirenena frantsay.
Laharam-pahamahana ny ady amin’ny tsy fandriampahalemana eto amintsika. Hitsangana ny governemanta ka heverina fa olona hahavita azy no hipetraka eo amin’ireo toerana telo ho an’ny minisitra misahana ny tsy fandriampahalemana. Tsy hoe tsy nahavita azy ny teo aloha fa tsy ampy ny paikady nentina nampandry fahalemana ny vahoaka. Tsy ho mpitandro filaminana hiaro seza na hiaro ny mpitondra ny hiasa, manomboka amin’ity hoe governemantan’ny marimaritra iraisana, fa hiaro ny vahoaka sy ny fananany. Miandry ny rehetra izany!